A320 ENGINE RESTART 1 sano 8 bilood ka hor #1257
FADLAN Caawin. ka dib markaad degto a320, xiro mishiinada. laakiin markii aan isku dayayo inaan dib u bilaabo matoorada diyaarad cusub, mashiinnadu waxay si toos ah u sigaaraan sigaarka madow, oo run ahaantii ma bilaabaan. Waa maxay khiyaamada?
A320 ENGINE RESTART 1 sano 8 bilood ka hor #1261
maleyneyso inaysan jirin wax caawimo ah halkan. mahadsanid
A320 ENGINE RESTART 1 sano 8 bilood ka hor #1262
Ma siinaysid macluumaad ku filan qofkasta oo kaa caawin kara ... Kee add-on ma ka hadlaysaa Saxeex ama lacag la'aan? Dalxiis duulimaadkee?
Duulimaadyo ammaan ah
A320 ENGINE RESTART 1 sano 8 bilood ka hor #1263
THANKS ERIK adoo adeegsanaya bilaashka ah rikoooo fsx daabacaha uumiga.
A320 ENGINE RESTART 1 sano 8 bilood ka hor #1267
Waxaan maanta imtixaanaad sameeyey, laakiin ma awoodo inaan soo saaro arrintaada, aan sugno gargaarka dadka kale ee laga yaabo in ay lahaayeen arrin isku mid ah.
A320 ENGINE RESTART 1 sano 8 bilood ka hor #1268
Ma isticmaashaa wax addon barnaamijyada? Tusaale ahaan, markii aan lahaa FSX Waxaan isticmaali jiray Rakaabka FS. Waxay ku duubi doontaa dayactirka diyaaradaha, iwm. Markaa haddii aadan sii wadin dayactirka waxay markaa isku dayi doontaa qalabka jaba, jabsiga mishiinka liita, iwm. Haddii aad isticmaasho barnaamij /addon sidaasoo kale, iska hubi inaad dayactirto diyaaraddaada barnaamijka.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: mikmcc
A320 ENGINE RESTART 1 sano 7 bilood ka hor #1293
Labo marba hubi sanduuqa korantada, APU ayaa laga yaabaa in laga tago
A320 ENGINE RESTART 1 sano 7 bilood ka hor #1294
mahadsanid. waan isku dayi doonaa
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.239